Socodka geedi socodka socodsiinta dhalidda waa sida soo socota
1. Hawl -gelinta been -abuurka Been -abuurka ayaa ah habka ugu horreeya ee ka shaqaynta giraanta giraanta, oo sidoo kale loo yaqaan ka -shaqaynta bannaan. Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee been -abuurka ferrule waa: (a) Meel bannaan oo la mid ah qaabka badeecada ayaa la helaa, si kor loogu qaado heerka isticmaalka birta birta ...Akhri wax dheeraad ah »
Qianyong Bearing manufacturer Soo saare xirfadle ah, fadlan la xiriir Whatsapp: +8616536352555
Isticmaalka qaadista: giraangiraha hore ee baabuurka, gudbinta, giraangiraha dambe, fallaadhaha pinion kala duwan. Mashiinnada dhismaha, mashiinnada mashiinka, mashiinnada beeraha ee waaweyn, dhimista qalabka tareenka ...
Waxaan ahay soo -saare dhaliya Shiinaha.
Waqtiga dhejinta: May-17-2021
Waxaan ahay soo -saare dhaliya Shiinaha. Haddii aad u baahan tahay SKF / FAG / INA / TIMKEN / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FYH / NMB / THK / IKO / ASAHI / HIWIN / DODGE / STIEBER / TSUBAKI / SNR / KBC / URB Iyo noocyada kale ee caanka ah Waad awoodaa ila soo xiriir Ku soo dhowow dhammaan noocyada dhalista ...Akhri wax dheeraad ah »
Waxaan ahay soo -saare dhaliya Shiinaha. Haddii aad u baahan tahay SKF / FAG / INA / TIMKEN / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FYH / NMB / THK / IKO / ASAHI / HIWIN / DODGE / STIEBER / TSUBAKI / SNR / KBC / URB
Horudhaca Dhalinta kubbadda jeexdin qoto dheer: oo hore loogu yiqiinay siddii kubbadda radial oo isku xigta oo keli ah, waa tii ugu ballaadhnayd ee la adeegsado. Astaamaheeda ayaa ah iska -caabbinta khilaafaadka hooseeya iyo xawaaraha sare. Marka la eego ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay kubbad jeexdin qoto dheer
Waa maxay kubbad jeexdin qoto dheer Dhammaan kubbadaha isku midka ahi isku mid ma aha. Noocyo kala duwan oo naqshado ah ayaa loogu talagalay inay buuxiyaan shuruudo gaar ah, markaa haddii aadan ahayn injineer ama alaab -qeybiye (xitaa haddii aad mararka qaarkood sameyso), had iyo jeer ma aha ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay waxyaabaha saameeya taam dhalista?
Waa maxay waxyaabaha saameeya taam dhalista? Ujeedada taam ahaanshaha ayaa ah in la sameeyo giraanta gudaha ama giraanta dibedda oo si adag loogu hagaajiyo usha ama qolofka, si looga fogaado dhumuc -xumida ama duruufaha ku -simbiriirixan ee isbarbar socda ...Akhri wax dheeraad ah »
Cinwaanka: A-1403-8, block block, West Minghu Road, Degmada Tianqiao, Jinan City, Gobolka Shandong
Taleefan: 0086 16536352555